Yini ezuzisa ukukhula ukudayiswa?
Umbuzo wokuthi ungathola kanjani inzuzo enkulu kakhulu ngezindleko ezincane wawufanele ngaso sonke isikhathi. Futhi, lapho kuqala enye inkinga yomnotho, ukuhambisana kwayo kukhula kaningi. Enye indlela yokuthola imali ukukhulisa okuthile okudayiswayo. Mayelana nokuthi kunenzuzo ukukhula ukudayiswa futhi ingxoxo yethu yanamuhla izohamba.
Yini okufanele ikhule izindlu ezithengiswayo?
Uma ungumnikazi ojabulisayo we-infield, khona-ke izinketho ezingakhula zithengiswa kakhulu. Kungaba amajikijolo, izithelo nemifino. Kodwa yini okufanele uyenze kulabo abangenalo isakhiwo sezwe? Kulesi simo, ungenza izimbali ezikhulile ekhaya, imifino noma amakhowe. Zonke lezi ziko ngeke zidinge imithi enkulu yezimali, noma izindawo ezinkulu zokulima, kodwa ngesikhathi esifanayo bazokwazi ukunikeza imali engenayo.
Indlela yokutshala imifino ukudayiswa?
Ukukhula kwemvelo njengomqondo webhizinisi kuzohlale kusebenza: ebusika nasehlobo, kufana nokufunwa, ngakho-ke, kuletha imali. Kodwa ukuze wenze leli bhizinisi libe nenzuzo, kubalulekile ukutshala imifino eluhlaza ngobuningi obukhulu. Uma sikhuluma ngendlu, khona-ke ngaphansi kweluhlaza kuzodingeka ukuthi ukhethe elinye lamakamelo. Isibonelo, ekamelweni elinendawo engaba ngu-20 m & sup2 cishe kungenzeka ukuhlomisa ama-racks ngezitshalo eziningana ezingama-30 m & sup2, ukukhanyisa ngamunye wabo usebenzisa izibani ezikhethekile. Ngemuva kwezinyanga ezimbili emva kokuhlwanyela imbewu, izindawo eziluhlaza zizoletha imali engenayo yokuqala. Ngokunakekelwa okunempilo kanye nempahla enhle yembewu, inzuzo evela kulo msebenzi ingaba ngu-500%.
Indlela yokukhulisa izimbali ezithengiswayo?
Ekhaya, izimbali zingatshalwa ngokudayiswa, njenge-hyacinths, i-senpolis, i-tulips, njll. Ekamelweni elinendawo engaba ngu-20 m & sup2, ungakwazi ngokukhululekile ukubeka izitshalo ezimbili nengxenye kuya kwezitshumi ezimbili, okuzothatha amahora angu-2-3 ngosuku ukuhlanza. Isibonelo, ngokutshalwa kwe-hyacinths, izindleko eziyinhloko kuzokuthenga ukuthengwa kwempahla kanye nenhlanganisela yomhlaba. Futhi, izimbiza ezilahlwayo zokuphakama ezincane kuzodingeka. Izimbali ze- hyacinths kufanele zilindeleke izinyanga ezintathu emva kokutshala, futhi lesi sikhathi singancishiswa ngokushintsha izinga lokukhanyisa.
Indlela yokutshala ama-mushroom ukudayiswa?
Kuzobe kunenzuzo enkulu ukukhula emasimini ukudayiswa. Kodwa kuzodinga igumbi elihlonyelwe ngokukhethekile, nokunamathela ngokuqinile embusweni wokushisa, kanye nezindleko ezibonakalayo ezibalulekile. Ukuze ukhule ama-mushroom, kuzodingeka uthenge i-substrate ekhethekile, i-mycelium. Ukuvuna kokuqala kwamakhowe kungaqoqwa ezinyangeni ezingu-2-3 ngemuva kokutshala i-mycelium.
Nini ukuqoqa imbewu ye-anyanisi?
Izinhlobonhlobo zamazambane "Gala" - izici
Ukudla ama-strawberry emva kokuvuna
Izinyathelo zokulwa ze-Hawthorn
I-Streptocarpus - ukunakekelwa nokulima, kanjani ukudala izimo ezinhle zokukhula?
Nini ukufakelwa ama-strawberries entwasahlobo?
I-strawberry ikhula ngaphandle
Ukutshala izitshalo zezindlu zokulala
Indlela yokugcina i-cannes ebusika?
Ixia - ukutshala nokunakekelwa
Ikhukhamba «Masha F1»
Heather - ukutshala nokunakekelwa
Imibhede yemifula nemibhede yembali ezweni
Izicathulo zomshado zase Winter
Izigqoko ezinamathekisthi ezinamathele abesifazane
Ama-shutter wokuvala amafasitela epulasitiki
Ukuvakasha eKyprus - Ayia Napa
Amaphuzu avelele njalo
Amantongomane ngobisi obilisiwe obilisiwe
Ukusetshenziswa kwephayinaphu yokulahlekelwa isisindo kanye nempilo yabesifazane
I-Cyclamen - ukufakelwa
Yini izingane zethu namama angaphandle angondla izingane zabo ngekusasa?
Ukuhlukanisa ukudla - imenyu
Indlela yokunqoba indoda ka-Aquarius?